छोरी लिन स्कुल पुगेका यी ब्याक्ति जस्को पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो, एथार्थ थाहा पाउँदा परे सबै चकित – Nepali Taja Khabar
अमेरिकाको एक स्कुलमा ६ वर्षकी छोरीलाई लिन पुगेका एक पिताको चर्चा अत्याधिक बढेको छ । मानिसहरु उनलाई एक आदर्श पिताको रुपमा चित्रण गर्दै उनको प्रशंशा गरिरहेका छन् ।
ती ६ वर्षकी बालिकाले एक दिन स्कुल पोसाकमै पिसाब गरिन् त्यसपछि स्कुल स्टाफले उनका पितालाई फोन गरेर छोरीलाई लिन बोलाएका थिए । बालिकाका पिता जब छोरीलाई लिन स्कुल पुगे उनको पाइन्ट देखेर सबै जना जिल्ल परे । ती पिताको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।
उटाह राज्यको एक स्कुलमा पढ्ने ६ वर्षकी बालिका भेलेरी सेवार्डले एक दिन स्कुल युनिफर्ममै पिसाब गरिन् । यो थाहा पाएपछि स्कुलका स्टाफले उनका पिता बेन सेवार्डलाई फोन गरेर छोरीलाई लिन बोलाए ।
बेनले जब आफ्नो छोरीसँग भएको घ/टनाबारे थाहा पाए त्यसपछि उनले बुझे कि अब उनले के गर्नुपर्छ । उनी छोरीलाई लिन स्कुल आए । स्कुल आउँदा उनले यस्तो काम गरे कि उनकी छोरीलाई कत्ति पनि बेइज्जतीको सामना गर्नु नपरोस् ।
जब बेन छोरीलाई लिन स्कुल पुगे उनले आफ्नो पाइन्टमा अगाडिपट्टि केही पानी खन्याए । त्यसपछि झट्ट हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि उनले पनि पाइन्टमै पिसाब गरेका थिए ।
आफ्नो पाइन्ट भिजाएपछि बेन छोरीलाई लिन सिधै प्रिन्सिपलको अफिसमा पुगे । त्यहाँ छोरीलाई देखेपछि उनी छोरीनजिक गए र भिजेको पाइन्ट देखाउँदै भने ‘मलाई तिम्रो ब्याग देउ । मैले यो भिजेको दाग लुकाउँछु ।’ त्यसपछि उनले अगाडि भने ‘मैले पिसाब रोक्नै सकिन र यस्तो भयो ।’
आकाशबाट खसेका ढुङ्गालाई जम्मा गरेर यसरी करोड कमाउँछन् यी व्यक्ति !
ट्याक्सी चालक भन्छन्:- हलो जोत्नेलाई ल्याएर मन्त्री बनाएका छन् , अनि कहाँ पठाओ बन्द हु्न्छ ? हेर्नुहोस् यो भिडियो